के कारण-ले जति प्रयास गर्दा पनि पूर्ण सन्तु-ष्टि हुँदैन
भनिन्छ, दाम्पत्य जीवनमा आधाभन्दा धेरै खुशी यौन सन्तुष्टिबाट नै मिल्छ । यस अर्थमा भन्ने हो भने व्यक्तिलाई खुशी बनाउनमा यौनजीवनको महत्वपूर्ण भुमिका रहेको हुन्छ । अझ यौनजीवनले व्यक्तिको शारीरिक पक्षमा मात्र नभई मानसिक पक्षमा समेत सकरात्मक महत्व राख्छ भन्ने दावी केहि अध्ययनहरुको समेत रहेको छ ।
तसर्थ, व्यक्तिको शारीरिक एवम् मानसिक दुवै पक्षमा विशेष महत्व राख्ने यौन जीवनमा कहिलेकाँहि सहकर्मीको कयौं प्रयास र मेहेनतको बाबजुद पनि सन्तुष्टि प्राप्त नहुने जस्ता समस्या देखा पर्दछ ।
यसले व्यक्तिलाई असन्तुष्ट बनाउनुको साथै पारिवारिक कलह समेत निम्त्याउन सक्छ । आखिर ! किन हुन्छ मानिसमा यौन असन्तुष्टि ? के कारणले व्यक्तिले जति प्रयास गरेता पनि यौन सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्दैनन् ?
व्यक्तिमा यौन सन्तुष्टि देखा नपर्नु पछाडि विभिन्न कारणहरु रहेका हुन्छन् । त्यसमध्येका विभिन्न कारणलाई शारीरिक एवम् मानसिक पक्ष गरी दुई भागमा विभाजित गरिएको छ ।
१ . शारीरिक कारण:
यौन सन्तुष्टि प्राप्त नहुनु पछाडिको मुख्य कारण अन्र्तगत शारीरिक पक्ष पनि हो । अर्थात् व्यक्तिको शरीरमा भएका शारीरिक समस्या तथा रोगले पनि यौनजीवनमा प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पार्दछ । यौन सन्तुष्टि पूर्ण रुपमा प्राप्त गर्न नसक्ने शारीरिक कारणहरु निम्न रहेका छन्ः पिसाब सम्बन्धि संक्रमण तथा क्यान्सर सुगर, मुटु तथा रगत सम्बन्धिका रोग उच्च रक्तचाप उच्च(हाई) कोलेस्टोर हार्माेनको
गडबढि अल्कोहोलको उच्च सेवन मदिरा एवम् नशाजन्य पदार्थको सेवन मस्तिष्क सम्बन्धिका समस्या दिर्घरोग(जस्तोः मिर्गाैला फेल हुनु) नशा ड्यामेज माथि उल्लेखित निस्कर्ष अनुसार कुनै पनि खालको शारीरिक समस्या भएका व्यक्तिले सामान्य अर्थात् स्वस्थ व्यक्तिको तुलनामा यौन सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्दैनन् । यदि तपाई पनि आफ्नो यौन जीवनमा खुशी हुन सकिरहनु भएको छैन भने तपाईले एकपटक चिकित्सकको परामर्शमा शारीरिक जाँच गराउनु उचित रहन्छ ।
२. मानसिक समस्या:
शारीरिक पक्षजस्तै मानसिक पक्षले पनि यौन जीवनमा विशेष महत्व राख्दछ । यौनिक क्रियाकलापमा गरिने गतिविधि व्यक्तिकोे सोचाई तथा ग्लानिमा पनि निर्भर रहन्छ ।
पूर्व प्रेमीको सम्झना, डिप्रेशन, डर, चिन्ता, विगतमा घटेका भयानक घटना जस्तोः बलात्कार, छेडछाड, यौन सम्बन्धिका तीता घटनाजस्ता आदि पक्षका कारण पनि व्यक्तिको यौनजीवन सुखमय नहुन सक्छ ।
तसर्थ, आफूमा यस्ता समस्या देखा परेमा व्यक्तिले सकिन्छ भने आफ्नो पार्टनरलाई खुलस्त रुपमा बताउनु पर्दछ । अथवा मनोचिकित्सकको परामर्श अनिवार्य रुपमा लिएर पनि यस समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ ।
२०७८ असार ३१, बिहीबार प्रकाशित 1 Minute 866 Views